Haweenay ka shaqeyso NAV oo loo xukumay inay galmo ahaan uga faa´iideysatay nin qoxooti ah. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Haweenay ka shaqeyso NAV oo loo xukumay inay galmo ahaan uga faa´iideysatay...
Haweenay ka shaqeyso NAV oo loo xukumay inay galmo ahaan uga faa´iideysatay nin qoxooti ah.
Haweenay Kontomeeyo (50) jir ah oo ka shaqeyso hey´adda NAV ayaa lagu xukumay 14 bilood oo xabsi ah, iyo 100.000 kr oo magdhow ah, kadib markii lagu helay danbi ah inay si qaldan uga faa´iideysatay booskeeda shaqo, ayna galmo(jinsi) la sameysay nin qoxooti ah oo ay kiiskiisa gacanta ku heysay.
Waxaana sidoo kale lagu helay danbi ah inay kiis dacwad been ah usoo gudbisay hey´addaha booliska, kadib markii uu ninkaas soo bandhigay dhibta uu la kulmay.
Haweeneydan ayaa ninkan oo ah qoxooti Siiriyaan ah ka caawineysay codsiga dacwad uu u xareynayay wiil walaalkiis ah oo uu rabay in Norway loo keeno. Waxaana labadooda dhexmaray xiriir galmo ah oo labada qofba uu midba si u micneeyay.
Ninka dhibanaha ah oo sodomeeyo(30) jir ah ayaa kulan ka dalbaday madaxa shaqada ee xukumay naagta kiiskiisa gacanta ku heysay, wuxuuna sheegay inuu dareemayo inuu cadaadis ku saaranyahay inuu galmo la sameeyo haweeneyda kiiskiisa gacanta ku heyso, hadii kale ay adkaaneyso in walaalkii Norway loo keeno. Madaxa shaqada ayaana kiiskii sii gudbiyay.
Haweeneyda la eedeeyay ayaa dhankeeda ku jawaabtay inay dacwad kufsi ah ka gudbiso ninkaas, waxeyna sheegtay inuu u geystay galmo xoog ah oo aysan iyadu raali ka aheyn.
Maxkamada oo kiiska u garqaaday:
Maxkamada racfaanka ayaa haweeneydan ku xukuntay 14 bilood oo xabsi ah, waxeyna ku heshay danbiga lagu eedeeyay ee ahaa inay si qalday uga faa´iideysatay awooda booskeeda shaqo, ayna galmi la sameysay qof macaamiil ah. Dhanka maxkamada ayaa been ku tilmaantay kiiska kufsiga ah ee haweeneydu ay kasoo gudbisay ninkaas, kadib markii uu soo bandhigay xiriirka labadooda ka dhaxeeyo.
Maxkamada degmada Salten oo horey iska kiiskan u xukuntay, ayaa gaartay go´aan lamid ah kan maxkamada racfaanka.
Xigasho/kilde: NAV-konsulent må i fengsel etter sex med syrisk flyktning
Previous articleDNB oo lagu dacweeyay in qoxootiga uu u diido koonto(xisaab) Banki: Sababtan darteed.
Next articleUK iyo Faransiiska oo kaluumeysi isku heysto.
Abdulkadir Ali Elmi
Waa arin cusub oo ceeb ku ah inkastoo dadka NAV ka shaqeeya ay ceebta ku fanaan.Waxaan ogeyn in soo galootiga ay ka dhacaan lacagta ay xaqa u leeyahii ayagoo sharcid been ah shegaayo.